Akụkọ - Gosiputa ibu ọrụ, mee ka ọrụ dị ike, ma mepụta elele
Mee ka ọrụ dị iche iche doo anya, mee ka ibu ọrụ sikwuo ike, ma mepụta uru
Nyocha arụmọrụ nke ogbako ọ bụla bụ otu n'ime usoro ụlọ ọrụ yana mbọ dị mkpa na mgbanwe ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ naanị ụzọ iji belata ọnụ ahịa nke ọma ma melite asọmpi nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọnụahịa nke akụrụngwa abawanyela oke, na inye ike na ụkọ mmiri na-ama nnukwu ụlọ ọrụ aka. Anyi aghaghi ime ka uche anyi mee ezigbo oru nke nyocha na omumu ihe omuma a ma bulie arụmọrụ nke ulo akwukwo a ka ndi ulo oru nwee uzo ha. Atụmatụ ntule na-esetịpụ ebumnuche atọ: ebumnuche bụ isi, ebumnuche ebumnuche, yana ebumnuche a na-atụ anya ya. Na ebumnuche nke ọ bụla, ihe ngosi ọkwa nke mbụ dịka mmepụta, ụgwọ, na uru maka 50%, na ebumnuche njikwa dị ka mma, mmepụta nchekwa, mgbanwe teknụzụ, na akaụntụ mmepụta ọcha maka 50%. Mgbe e setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ, a na-agwa ndị nduzi ogbako ahụ ka ha rụsie ọrụ ike.
Maka ụlọ ọrụ na-etolite n'ikpeazụ, ha ga-arụ ọrụ nke ime ha, na-elebara njikwa anya nke ọma, ma na-enye nha nha anya na nrụpụta na ogo. Nchikota nke abuo enweghi ike ikwenye. Ndi isi ulo akwukwo nile kwesiri iji obi oma mee ya, were nlezianya nyocha obula, nabata ule nke ulo oru, ma guzobe usoro ugwo oru.
Ntụle arụmọrụ nke onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ obere ngalaba na-aza ajụjụ na-agwakọta ọgwụgwọ na nyocha arụmọrụ iji mee ka ọrụ onye ntụzịaka ahụ pụta ìhè na uru ọ bara uru, ka iwalite ịnụ ọkụ n'obi nke ọrụ na arụmọrụ ụlọ ọrụ. Enwere m olile anya na site na ịme ka usoro nyocha arụmọrụ ka mma, anyị nwere ike ị hụ na ebumnuche afọ a ga-aga nke ọma. A na-atụ anya na onye nduzi nke ogbako ahụ nwere ike iji akụ nke onye isi otu na ndị ọrụ were ọrụ nke ọma ma gbalịsie ike ịmepụta ọnọdụ ọhụrụ na ọrụ ahụ.